हेमराजको मृत्यु रहस्यमय ! गाउँले भन्छन्, ‘घटनामा कान्छी श्रीमतीको हात छ’, एकै दिन ५३ पटक श्रीमतीलाई फोन, घटनास्थलमा देखिए यस्ता संकेत (भिडियो हेर्नुस्) – Sidha Kura
मुख्य पृष्ठ /भिडियो/हेमराजको मृत्यु रहस्यमय ! गाउँले भन्छन्, ‘घटनामा कान्छी श्रीमतीको हात छ’, एकै दिन ५३ पटक श्रीमतीलाई फोन, घटनास्थलमा देखिए यस्ता संकेत (भिडियो हेर्नुस्)
काठमाडौ । बांके जिल्लाको राप्ती सोनारी गाउँपालिका वडा नं २ का २८ वर्षीय हेमराज खत्री वेपत्ता भएको १९ दिन पछि जंगलमा निधन भएको अवस्थामा फेला परेका छन् । उनका दुई औँला खसेको अवस्थामा र उनले चढेको मोटरसाइकल सय मिटर पर फेला परेको छ । उनको अरु कसैले ज्या न लि एको आरोप परिवारका सदस्यको छ । घटनास्थलमा चाउचाउको दुईवटा खोल र केही सुन्तला समेत फेला परेको छ ।
उनी कान्छी श्रीमती श्यामकुमारी चौधरीलाई भेट्न भन्दै निस्किएको गाउँलेको भनाई छ । उनी हराएको दिन घरमा भएकी जेठी श्रीमतीसंग उनले दुई पटक कुरा गरेको प्रमाण छ भने कान्छी श्रीमतीसंग ५३ पटक कुरा गरेको देखिएको छ । आखिर उनले कान्छी श्रीमतीसंग किन त्यती धेरै पटक कुराकानी गरे ? प्रश्न स्थानियले र हेमराजको परिवारले लगाएको छ ।
उनले श्यामकुमारीलाई कान्छी श्रीमतीका रुपमा ल्याएको भएपनि परिवारको असहमति र कानुनी ब्यवहारका कारण संगै बसेका थिएनन् । पछिल्लो समय भने उनीहरु भेटघाट गरिरहेको खुलेको थियो । उनीहरु नजिक भएको गाउँलेलाई पनि थाहा थियो । हेमराजको शव फेला परेको स्थान पनि श्यामकुमारीको घर नजिकै भएका कारण पनि गाउँलेको शंका श्यामकुमारी माथि नै छ ।
घटनास्थलमा वि ष को वोतल पनि छ तर त्यो खाएको जस्तो कुनै संकेत नभएको स्थानियको भनाइ छ । दुई वटा चाउचाउ, एउटा पानीको बोतल र केही खाएको र केही नखाएको सुन्तला घटनास्थलमा देखिएको हो । हेमराजले ति सबै एक्लै खाए होलान ? प्रश्न उठेको छ ।